10 May, 2019 - 00:05	 2019-05-09T17:44:19+00:00 2019-05-10T00:03:38+00:00 0 Views
MAKADII? Ndotsvagawo mukadzi ari serious ane makore 28 – 35. Ini ndine makore 46, HIV negative. Nhare yangu 0782 980 649.
Ndiri murume ane mwana 1, ndine makore 33. Ndinoda mukadzi ane mwana 1 kana 2 wekuroora ane makore 25 kusvika 30. Andifarira ngaandibate pa0771 182 748.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 27 nevana 2, ndiri kutsvagawo murume anoda zvemba ari HIV negative. Anenge ada nezvangu ngandibate pa0782 895 655.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 30 okuberekwa. Ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 20 kusvika 27. Andifarira anondibata pa0714 608 022.
Makadini zvenyu veKwayedza? Ndiri murume ane makore 28, ndinotsvaga mukadzi ane 20 makore kusvika 27 ane mwana kana asina. Ngaave anoenda kubasa kana asingaendi. Ndoda ari muHarare ari serious nekuvaka musha. Anenge andifarira ndobatika pa0712 098 382.
KuTishamwaridzane makadini zvenyu veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 43 nevana vaviri. Ndiri mugari wemuHarare uye ndinotsvagawo murume ari pachokwadi anoshanda. Ngaave nemakore 48 kusvika 53, ane vanawo 1 kana 2. Asiri pamushonga nekuti ini handisiwo pamushonga. Ndinoda mugari wemuHarare, vekunze mirayi zvenyu. Ndinoda anotamba nemvura, vapfupi kwete. Ndinowanikwa pa0716 830 496.
Ndiri mukomana ane makore 28, ndinotsvakawo musikana ane makore 18 kusvika 20 ave kuda zveimba. Ngaave anotya Mwari, nhamba dzangu 0716 065 996.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 24, ndinotsvaka musikana ane makore 18 – 20, Nhare yangu 0713 103 399.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 39. Ndodawo mudzimai ane mwana mumwe ane makore 32 kusvika 35. Zvizhinji tozotaura pa0718 960 247.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 36, ndinotsvaga murume ari pachokwadi anoda zvekuroora asiri pamushonga. Andifarira anondibata pa0771 472 371.
Makadiniko hama neshamwari nevese vekuTishamwaridzane? Ini ndine makore 37, ndinodawo murume ari pachokwadi anoda zvewanano. Anoda nhamba dzangu 0718 666 951.
Makadini veKwayedza? Ndotsvaga mukadzi wekuroora ane makore 22 kusvika 30 ari negative chero ane mwana. Nhamba dzangu 0773 989 195.
Ndotsvakawo mukadzi akanaka anogeza mutsvuku anoita basa remaoko. Nhare yangu 0773 832 318.
Ndiri murume ane makore 26, ndinotsvakawo musikana kana mudzimai wekupinda naye murudo. Nhare yangu 0714 934 777.
Ndinonzi Sasha, ndinogara kuZimre Park uye ndine makore 23. Ndinotsvagawo mukomana ane makore 26 – 30 ari muHarare. Ini ndoshanda, nhare dzangu 0782 705 686.
Makadini? Ndiri mukadzi ane makore 34 nemwana 1, ndiri negative uye ndodawo murume ane makore 39 – 42 ari negative seni. Zvakawanda totaura pa0778 524 273.
Ndiri murume ane makore 41 nevana vaviri. Ndiri pamushonga uye ndinodawo mukadzi anoda zvemusha ane vanavo vake. Ngaave nemakore 35 zvichikwira, nhamba dzangu 0775 582 578.
Makadii vechirongwa? Ndiri mukadzi ane makore 31, ndotsvagawo murume ane makore 35 kusvika 45. Ndiri pamushonga, ndine vana 4. Andida ngaandibate pa0783 801 608.
Ndiri murume ane makore 32, ndiri negative uye ndinotsvakawo musikana anoda imba ari serious. Ndobatika pa0776 566 010.
Makadiiko veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 28 nevana 2, ndiri kutsvakawo murume ari pachokwadi anoda zvekuroora, ndinobatika pa0776 619 472.
Ndinotenda vechirongwa chino. Vaifona panhamba idzi 0716 043 574 chiregai zvenyu. Ndakazomuwana wandaida. Ndatenda.
VepaTishamwaridzane makadiniko? Varume kutsva ndebvu vanodzimurana. Ini ndine makore 37. Ndiri murume ari kutsvaga shamwarikadzi chaiyo yepamwoyo, wekudzimurana moto naye kana tatsva ndebvu nekutanhaurana zvikwekwe kumusana. Ndinoda ane mazirudo anopfuta kunge zuva riri mudenga, achiyevedza senyenyedzi chaiyo inopenyerera mudenga ari mutano chose. Shamwari yangu yepamwoyo yakasununguka kutaura neni pa0712 774 011.
Ndiri mudzimai ane makore 39, ndinorarama nemushonga uye ndoda murume ane makore 40 kusvika 65 ari pamushonga. Ndine vana vatatu, murume uyu ngaave nevana vasingapfuuri vana uye achishanda. Ngave anoda zvemusha, handiratidzi kuti ndiri pamushonga saka ngaave asingaratidziki. Andifarira ndobatwa pa0716 87 7472.
Ndiri mukadzi ane makore 25, ndotsvagawo murume ane makore 35 kusvika 45. Ndibatei pa0771 888 925.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri murume ane makore 42 ndinodawo mukadzi ari pachokwadi newanano. Ndine vana vaviri uye ndinoshanda ndiri muHarare. Nhare yangu 0772 278 373.
Makadini? Ndiri mudzimai anotsvakawo murume akavimbika. Ndiri pamushonga asi handiratidze. Ndiri wa82, andifarira ngaandibate pa0735 424 245.
Tishamwaridzane makadii? Ndiri murume ane makore 46, ndakambonyorera asi handina kuwana wandaida. Ndinoda mukadzi asina kumboroorwa nekuti ini handina kumboroora. Nhamba yangu 0782 458 488.
Makadini veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 39 nemwana mumwe. Ndinotsvakawo murume anondiroora ane makore 42 kusvika 48 akafirwa uye ane vana. Nhare yangu 0779 838 761.
Ndiri murume ane makore 28, ndiri pamushonga uye ndoda mukadzi ari serious anoda zvemba. Nhare yangu 0773 023 097.
Makadii vabiki vechirongwa? Ndiri mukadzi ane makore 25 nevana 2 uye ndiri kutsvakawo shamwari yekuwadzana nayo. Handina murume, nhamba yangu 0779 468 161.
Makadii vepaKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 35 ekuberekwa nevana 3. Ndodawo murume akavimbika uye abve zera asi matsotsi musafone nevane vakadzi ndapota hangu. Vandifarira ndobatika pa0715 105 934.
Ndiri imukomana ane makore 26, ndinoshanda paGold Milling Centre uye ndinodawo musikana ane makore 18 kusvika 22, mushava akasimba zviri pakati nepakati. Ndinobatika pa0717 270 276.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 22 nemwana 1, ndinotsvagawo murume ane makore 35 zvichikwira. Ndiri negative uye ndinoda anoda zvekuroora. Nhare yangu 0717 714 835.
Makasimba here veKwayedza? Ini ndinotsvagawo mukadzi wekuvaka naye imba chaiyo chaiyo. Ngaave mutsvuku munakuwo but asingaratidzi kurwara. Ngaave ane makore asingadarike 35. Nhare yangu 0714 918 372.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 27, ndiri kutsvagawo musikana ane makore 18 – 24 ari pachokwadii anoda kupinda murudo. Nhare yangu 0776 810 641.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 32 nevana 2. Ndinotsvagawo murume ane makore 35 kusvika 45 ane vana vakewo. Ngaave akavimbika, anoziva Mwari.
Nhamba dzangu, 0716 385 944. Vane madzimai kwete.
Makadii zvenyu? Ndotsvagawo musikana ane rudo ane makore 20 zvichidzika ari serious uye anogara kuManicaland. Nhare yangu 0773 055 958.